Bafuna ukuthuthukisa i-netball eMbali | News24
Bafuna ukuthuthukisa i-netball eMbali
Abadlalela iqembu le-netball ngaphansi kwe-Oteniqua.ISITHOMBE : sithunyelwe
UKUQALA ikilabhu efundisa intsha ibhola lezandla (netball) ngenye yezindlela uMnuz Thobani Ndlovu acabanga ukuthi izogcina intsha imatasatasa ingagcini seyenza izinto ezingalungile.
UMnuz Ndlovu uthe uqale lekilabhu ebizwa ngokuthi yi-Oteniqua ngonyaka ka-2016 ngenhloso yokuvuselela uthando lomdlalo webhola lezandla endaweni yaseMbali.
Selokhu eyivulile lekilabhu uMnuz Ndlovu usenezigaba ezintathu nokungu U-17, U-19 kanye nesigaba sabantu abadala.
Wonke lamantombazane angaphansi kwalekilabhu azilolonga esikoleni samabanga aphakeme iZamaZulu zonke izinsuku ntambama.
“Into eyangigqugquzela kakhulu ukuthi ngifuna ukuqala lento engiyenzayo kungemuva kokuba khona intombazane yaseMbali Unit 2 eyazibulala ngoba inezinkinga.
“Ngabe sengiya esontweni nalapho umfundisi afike wakhuluma ngalolu daba wabe esebuza ukuthi njengoba sihleli sikhuluma ngokuthi intsha ibhekene nezinkinga yini thina esiyenzayo njengomphakathi ukulekelela nokwenza isiqiniseko sokuthi intsha ihleli imatasatasa ukuze bangacabangi izinto ezingalungile. Ahlala kumina ngaphakathi lamazwi amfundisi.
“Ngesikhathi ngiqala ngiqoqa amantombazane kuzona zonke izindawo ezakhelene neMbali Unit 2.
“Ngaqala nginabantu abayi-12 kuphela nabo bancipha babayi-10 kodwa lokho akuzange kungithene amandla okuthi ngiqhubeke. Ngaqhubeka ngabekezela yize kunzima njengoba ngiwumuntu ongasebenzi.
“Ngabanikeza izinto zami zokudlala ibhola bazishintsha bazenza umfaniswano wabo kwazise ngangiwumuntu owayedlala ibhola,” kubeka yena.
Uqhube wathi ufuna ukuqhubeka ashumayele iVangeli lokuthi abantu abeze bazojoyina ukuze bezodlala nabo.
Uthe : “Ngiyagqugquzela nasezikoleni ukuthi bangalulaxazi lolu hlobo lo mdlalo ngoba zikhona izingane ezinethalente lawo futhi ezinekusasa kuwona. Akungabhekwa ukuthi zihlalaphi noma zifundaphi kodwa okubalulekile ithalente lazo.
“Nginezingane engaqala nazo lekilabhu esezidlala ezingeni lezwe, elesifundazwe kanti abanye badlalela isiFunda saseMgungundlovu. Lokhu kuyakhombisa ukuthi likhona ithalente nokuthi kukhulu esingakwenza uma nje singabambisana sonke singumphakathi silekelele intsha yakithi,” kubeka yena.
UMnuz Ndlovu uphinde wagqugquzela abazali ukuba beseke izingane zabo uma zizinikela kwezemidlalo ngoba ngenye yezindlela izingane ezizogqugquzeleka ngayo.